Ntupu ọla gbasachara, ntupu igwe gbasasịrị, ntupu waya ịchọ mma - Dongjie
Ngwa igwe gbasachara
Ntupu ọla eji achọ mma
Anụ anụ anụ
Ntupu igwe gbasaara Micro
Ntupu kpara akpa
Ntupu ígwè arụrụ arụ
Metal perforated nke anaghị amị amị
Grills na mkpuchi
Ntupu waya kpara akpa
Ihuenyo ịchọ mma
Ngwa waya eji achọ mma
Njikọ njikọ Chain
ákwà mgbochi ofufe
Ntupu waya crimped
Ngwa ahịa stamping miri emi
Akụkụ Stamping Metal
Okpu ngwụcha nzacha
Ntupu ihuenyo windo
Anti-fog na Haze Window Gauze
Gauze windo nkọwa dị elu
Ihuenyo ntupu ígwè
Ntupu ihe owuwu
Ọrụ dị arọ gbasachara ngere igwe waya
Ntupu ígwè waya dị ọnụ ala agbasawanye maka steepụ
Ngwongwo ụlọ ọrụ na-ebunye n'ogbe igwe anaghị agba nchara gbasaa...
Ngwa igwe anaghị agba nchara agbasa dị ọnụ ala ...
Ihe mkpuchi aluminom gbasaara igwe ntupu n'èzí ...
Ọnụ ala diamond oghere igwe anaghị agba nchara Galvaniz...
Ihe ịchọ mma Aluminom gbasawanye / galvanized Expa...
Igwe anaghị agba nchara nchara dị arọ gbasaa ọla na...
Anping Dongjie Wire Mesh Products Co., Ltd dị na Anping, Hebei, ebe bụ obodo nke ntupu waya n'ụwa.Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa nke gbasaa metal ntupu, perforated metal ntupu, kpara waya ntupu, ji achọ waya ntupu, iyo njedebe ọgwụgwụ, metal stamping akụkụ na miri nhazi nke ọzọ waya ntupu ngwaahịa.
A tọrọ ntọala ụlọ ọrụ Anping Dongjie Wire Mesh Products Factory na1996na ihe karịrị10,000mpaghara sqms.Anyị nwere karịa100ndị ọrụ ọkachamara na4 ogbako ogbako di elu: ogbako ntupu igwe gbasawanye elu, ogbako gbawara agbawa, stamping waya ntupu ngwaahịa ogbako, ebu mere na omimi nhazi ogbako.
Anyị abụrụla ọkachamara na ntupu waya ruo ọtụtụ iri afọ wee nweta ahụmịhe bara ụba na mpaghara a.Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị ejirila igwe ọhụrụ na nke dị elu rụọ ọrụ iji rụpụta ngwaahịa nhazi nkenke.Anping Dongjie anabatala yaISO9001 Asambodo Sistemu Ogo yana sistemu njikwa ọgbara ọhụrụ.Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-ebubata ntụkwasị obi, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Tọrọ ntọala na 1995
Ahụmahụ afọ 24
Karịa ngwaahịa iri na asatọ
Ihe karịrị ijeri 2.5
Nbunye ngwa ngwa
Ọtụtụ ngwa nke yinye njikọ nsu —...
Ntupu njikọ yinye Anping Dongjie Wir...
Oghere uzuzu ikuku- Anping Dongjie Waya ntupu...
High-edu ifufe uzuzu nsu Steel Wind B ...
Ojiji ntupu igwe gbasaara adịkarị –...
Facade igwe gbasachara agbasa ọla igwe gbasachara...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ntupu nwere perforated maka mgbidi ákwà mgbochi?
Ihe mkpuchi ihu nwere ọtụtụ uru...
Kedu ihe kpatara enwere ike iji ntupu ígwè gbasaa dị ka st ...
Ọla gbasasịrị bụ ihe dị n'etiti raw ute...
Ngwaahịa kacha ọhụrụ
Ọla rụrụ arụ arụrụ arụ
Metal ntupu nke mgbochi-slip
Ngwakọta waya Barbecue
Ọla Mgbasawanye Ihe Owuwu
Nye anyị email gị na a ga-emelite gị kwa ụbọchị na ihe kachasị ọhụrụ, n'ụzọ zuru ezu!
© Nwebiisinka - 1996-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, map saịtị
Bbq Grill Mesh, Mkpuchi ihu ntupu gbasaworo, Ngwa igwe gbasachara, Mpempe akwụkwọ aluminom gbasaara, Ihe eji achọ mma gbasaa ọla, Ọla gbasaara,